Mienzaniso mishanu yekutengesa email ECommerce nhau
Ehezve, inoyevedza email yekushambadzira mushandirapamwe inogona kuve nemhedzisiro yakanaka pane yako dijitari bhizinesi mutsara. Sezvo inogona kukubatsira kushambadza nevakuru zvivimbiso zvekubudirira zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa zvekuvandudza hukama hwebhizinesi nevatengi vako kana vashandisi. Kusvika padanho rekuti chero kutarisa kune kwako chikamu kunogona kukanganisa kuyedza kwese kwawanga uchiita kusvika ikozvino.
Kuitwa kwekushambadzira kweemail kunofanirwa kugadziridzwa nehunyanzvi hunokutendera kuti uzadzise zvinangwa zvekambani yako sezvo zviri pakupera kwezuva izvo zvinobatanidzwa mune idzi kesi. Iwe unofanirwa kudzivirira zvikanganiso mukusimudzira kwayo izvo zvinogona kukuita iwe kurasikirwa nevatengi vako uye nekudaro kudzikira kubhadhara pakupera kwemwedzi. Mupfungwa iyi, zvinonyanya kubatsira kuti kubva zvino zvichienda mberi iwe uri mumamiriro akakwana kuti uite inokurudzira kwazvo email kushambadzira.
Saka kuti iwe usave nematambudziko, hapana zvirinani pane kuve nekudzidza mune iri basa kuburikidza nemimwe mienzaniso yekutengesa email. Kwete pasina, zvinokupa iwe madhairekitori anodikanwa ekuti uite iri basa iro rakakosha mukati meinonzi commerce yedhijitari. Iko kwakanyanya kukosha chinhu kuve kugutsikana mune zvirimo kuti uite nzira yako mune ino yakakosha nzvimbo yekushambadzira kwemazuva ano uye yaiswa kune dijitari midhiya.
1 Mienzaniso yekutengesa email: maitiro ekuvandudza iwo?
2 Uchishandisa kuseka senge nzira yekutengesa
3 Ungaite sei zvinangwa zvako?
4 Tevedza sevhisi kana chigadzirwa
Mienzaniso yekutengesa email: maitiro ekuvandudza iwo?
Iwe unofanirwa kuve wakajeka kubva pakutanga kuti iwo mameseji zvakaringana kusimudzira Ivo vanoneta uye vashandisi vari kuramba vachitsvaga nemabhizimusi emhando. Kusvika pakutarisira zvemhando yepamusoro zvemukati uye pamusoro pezvose izvo zvine hunyanzvi. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei uchifanira kupurinda zvakanyanya kugadzirwa kwekubata uye kuzvitsauranisa iwe kubva kune vamwe kana zvasvika kune izvi zvekutanga zvinotsigira mune ruzivo.
Ehezve, nguva nenguva uchave wakashamisika kusvika pamweroi waunofanirwa kushandura zano rako maererano nenyaya iyi. Izvi zvinodaro nekuti zvinodikanwa kuti kubva ikozvino uchienda mune yakasarudzika mamiriro ekuti usarudze zvimwe zvakawanda zvepakutanga uye zvinonakidza email zvirevo. Asi ungavakudziridze sei kubva panguva dzino? Iwe haufanire kunetseka zvakanyanya nezve iyi nyaya nekuti isu tiri kuzokupa iwe inopfuura zano rimwe chete kuti iwe ugone kugadzirisa ichi chiitiko chinogona kukanganisa kambani yako, bhizinesi kana online chitoro zvakanyanya. Iwe unoda kuzvitora here?
Uchishandisa kuseka senge nzira yekutengesa
Iyi inzira iri kuramba ichishandiswa nemakambani uye mapuratifomu edhijitari ayo anosanganisira kuita zvemukati mumaemail mairi mafaro anotungamira pamberi pevamwe kufunga maitiro uye matauriro avo. Iwe haufunge here kuti fomati inonakidza kwazvo inogona kukwezva chikamu chakanaka chevatengi kana vashandisi?
Iwe unongofanirwa kutarisa kumwe emabhizimusi emhando dzakasarudzira zano rekunyengedza iri Semuenzaniso, mazhinji eaya ane chekuita nezve zvipfeko zvemitambo kana zvinyorwa zvekudzidzira mitambo. Maemail avo anokwezva anozokwezva kutarisisa kwavo, asi pamusoro pezvose nekuti ivo vanowana kunyemwerera kusinganzwisisike kubva pamiromo yako. Sezvinei pamwe nekubudirira mumhedzisiro izvo zvisina kukahadzika nezvidzidzo zvekushambadzira.
Icho chimwe chezvinangwa zvikuru zvemakambani epakati nepakakura. Mhando yavo yakavakirwa pane chimwe chinhu chakareruka sekuita kwavo bhizinesi uzivi kuzivikanwa kuburikidza neiyi ruzivo chiteshi. Iwo akanakisa ekushambadzira edhijitari anoti kwavari: iwo akanakisa maemail ndeaya anoita kuti iwe upinde munyika yekambani idzi. Ine chinangwa chakanyatso tsanangurwa uye icho hachisi chimwe kunze kwekutora pfungwa dzako kubva kuvashandisi.
Kana paine chikamu chebhizinesi chakagadzira zano iri, ndiyo yakabatana nemasangano ekubhengi. Semuenzaniso, Bankinter kana ING vari kuyedza kudzidzisa vatengi vavo tsika dzakanaka kwazvo. Ine zvemukati zvinosanganisa kushanduka uye kusimudzira kweayo zvigadzirwa uye masevhisi. Nemhedzisiro yakanaka pakati pevanogamuchira aya mameseji. Kune rimwe divi, ine mukana wakakura wekuti inogona kukubatsira iwe kuti utore chikamu muhukama hwebhizinesi nemabhangi. Nenzira iyo iwe uchazonyanya kuda kubvumirana zvigadzirwa zvavo kana masevhisi kubva panguva iyoyo.
Vaka kuvimba pakati pevatengi
Zvemukati zvemukati chishandiso chine simba chekuumba kuvimba pakati pemativi ese. Mune ino kesi, zvinogona kubatsira kwazvo kuita saizvozvo kuburikidza neshoko iro pasina mubvunzo rinoedza kuburitsa kunetseka kugutsa zvido zvemushandisi. Ichi chinangwa chinogona kuwanikwa kuburikidza nezviito zvinotevera zvatinokufumura pazasi.
Enzanisa nemaimeri emaimeri uye kuti rimwe bato rinoratidza kuti kune kuyedza kukuru uye kuzvipira pane chikamu chemabhizinesi edhijitari. Kune izvi, iwe unenge usina sarudzo kunze kwekusimudzira zvakasarudzika zvemukati izvo zvisiri mhedzisiro yekudzokorora uye zvemuchina basa.
Kuti mutengi kana mushandisi anzwe akabatanidzwa uye kuti izvi zvive nenzira iyi zvichave zvakakosha kwaari kuti aone kuti meseji yakagadzirirwa iye uye kuti haisi yezvinhu zvakagadzirwa sehukuru, sekune rimwe divi zvinowanzoitika neimwe frequency.
Vape masevhisi akasarudzika kana zvichidikanwa kushandisa zano rekushambadzira. Zvakanaka, mupfungwa iyi, hapana chinhu chiri nani kupfuura mushandisi iyeyeye achifunga kuti ari kutariswa uye kuti danho raachaita kubva panguva iyoyo anogona kufungidzirwa zvirinani. Kusvika padanho rekuti inofanirwa kukurudzirwa nenzira yakaenzana uye ine pfungwa.
Uye sedanho rekupedzisira, chokwadi chekuti yakanaka email yekutengesa inofanirwa kunge yakavakirwa pane isina kutaurika mhando uye ndizvo zvinogona kukonzera kufarira kwevatengi kana vashandisi kuti vadzokere kuchirongwa chedu chedigital.
Ungaite sei zvinangwa zvako?
Iva nepfungwa zano rinogona kukubatsira zvakanyanya mukusimudzirwa kwebasa rako uye izvo hazvisi zvimwe kunze kwemaemail akanakisa haasi iwo anotengesa iwe zvigadzirwa zvakanyanya. Kana zvisiri, pane kudaro, ndidzo dzinokwezva kutarisisa kune avo vese vanogamuchira. Pasi peiyi nzira yekutanga isu tichava nemimwe mienzaniso yemamodheru isu tichava munzvimbo yekutevedzera izvozvi.
Iyo email inogamuchirwa
Iyi mhando yeemail ndiyo chaiyo inoshandiswa nemabhizimusi emabhizimusi ayo ari kutanga kuzviisa pamusika, senge mutengesi wezvekufambiswa kwemabasa Eurona. Ivo vanoshandisa akasiyana ekushambadzira masisitimu ane chinangwa chikuru chiri kuvaka kuvimba nevatengi vako uye ndeipi mhando kana dzimwe nzira dzisinga regedzwe mune ruzivo kuratidza zvirimo.
Chigadzirwa kana kuvandudzwa kwebasa
Kana ivo vanogona kurasikirwa neichi chakakosha kurudziro, iyo inotsvaga pamusoro pezvose kupa yakanyanya ruzivo kune imwe chikamu chebhizimusi maitiro. Tichifunga nezvechiitiko ichi, zvakafanira kuti kubva ikozvino zvichienda mberi, uye kuburikidza neimwe yeemail iyi, iwe zivisa vatengi vako kana vashandisi nezvekutanga kwechigadzirwa chitsva kana sevhisi yechiratidzo chako. Nezvakanaka zvese zvainogona kuvaunzira, pamwe nekuve neyekutengesa mhando senge yako.
Iyi ndiyo nzira iyo makambani ari muchikamu chekufona, kunyanya ayo akabatanidzwa nenhare mbozha, akashandisa zvakanyanya. Iyi ndiyo nyaya chaiyo yeTelefonica kana Jazztel uye nechokwadi chose chekuti nguva nenguva wakapinda muchirongwa cheaya maitiro anoshanda.
Tevedza sevhisi kana chigadzirwa
Uyu muenzaniso unomira nekuve nemahara ekukura uye nekudaro zvinokurudzirwa zvakanyanya kune zvido zve ecommerce. Nekuti zviri nyore kwazvo kushandisa uye mhedzisiro yacho iri pakarepo. Kana iyi modhi ichizivikanwa nechimwe chinhu mukutungamira kwemakambani edhijitari, imhaka yekuti mapato ese anogona kubatsirwa. Inoiswa muzvikamu zvakaita sekupfeka, zvekuzvivaraidza uye nenzvimbo dzese dzetsika. Semuenzaniso, mukutengesa mabhuku pamusoro peInternet.
Tsvaga kubvumidzwa mhinduro
Ehezve, iri inoshanda kwazvo sisitimu yemakambani edhijitari sezvo iwe uchingoda kusvika kune ako akanakisa vatengi uye nekuvatumira iwo mushambadziro wekushambadzira nenzira yakasarudzika. Iyo ine mukana wakakura wekuti haizokubhadhare iwe kuyedza kukuru kupinza iyo modhi uye mukudzoka inokupa iwe zviwanikwa izvo zvichave zvinoshanda kwazvo mukutevera ako akanakisa vatengi. Nechinangwa chekusimudzira kutengesa mune zvigadzirwa zvako, zvinyorwa kana masevhisi, zvinova izvo zviri pakupedzisira zvinosanganisirwa mune idzi kesi.
Muzviitiko zvese, iwe unenge usina kusahadzika nezve kugona kwekuvandudza izvo zvinonzi kushambadzira maemail uye izvo zvakaratidzirwa mumienzaniso iyo yatakambokufumura. Iko zviwanikwa zvese zvinogona kuitwa nemakambani kuzadzisa zvinangwa zvavo mukati medhijitari yekushambadzira inoiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Email marketing » Mienzaniso mishanu yekutengesa email